galmada ninka iyo xaaskiisa marka naasaha waaweyn laga... - iftineducation.com
galmada ninka iyo xaaskiisa marka naasaha waaweyn laga…
aadan21 / January 8, 2017
iftineducation.com – Hada aayar uga bogo barnaamijkaan oo ah mid anfacaaya Raga xunkiisa yaryahay Waxaa la ogaaday dumarka ugu wax macaan.Raga soomalida ayaa laga raacay bahalka dumarka oo way suuxaan markay soo xasuustaan.
Waxa ayna tani keeneysaa in in labadaba ay gartaan waxa midka kale
raaxo uu ka helayo isla markaana kaga boganayo illaa uu ka gaaro
heerka gariirka galmada .
Balse waxaa jira haween badan oo dareemaya xiliga cayaarta naxariista
xanbaarsan socoto in aysan ninkooda kula xariiri karin hadal , inta
badanna xishooda ama ka cabsada in ninkooda fikir qaldan ka qaato .
lamaantiisa dooneyso , waxaana haweeneyda la gudboon in ay
ogaato in ay xaq u leedahay in ay ninkeeda u sheegto sida iyo habka ay raaxada
ku heli karto si uu ugu sameeyo .
Is fahanka sariirta oo la isu sheegto qofba sida uu macaanka galmada ku heli karo ayaa keenta in labada lamaane dareemaan dharag galmo oo ay raali isaga
Naagaha siilka macaan waa kuwa geedkooda qoyo marka…